Astaamaha: Ka Warbixinta Soosaarayaasha Barnaamijka Moobaylka | Martech Zone
sawirada waa madal warbixineed oo la awoodi karo oo loogu talagalay horumariyeyaasha barnaamijka moobiilka oo isu keenaya dhammaan iibka dukaankaaga, xogta xayeysiiska, dib u eegista adduunka, iyo cusbooneysiinta saacadlaha ah. sawirada wuxuu ururiyaa oo muujiyaa iibka & soo dejinta nambarada, dib u eegista adduunka oo dhan & darajooyinka, iyo xogta kale xalkooda warbixintooda.
Isku Xidh Bakhaarro Badan - raac oo isbarbar dhig barnaamijyada iOS, Mac, iyo barnaamijyada Android meel keliya.
Warbixinno Email Maalinle ah - oo leh tirooyin muhiim ah, oo ay ku jiraan xogta iibka, soo dejinta, dakhliga xayeysiinta, iyo darajooyin cusub.
Darajada Codsiga - la socoshada mid kasta oo ka mid ah qiimeynta barnaamijkaaga, iyaga oo ku wada shaxeynaya nooc kasta. Darajooyinka waxaa laga soo saarayaa dhammaan dukaamada abka ee adduunka oo dhan iyadoo la cusbooneysiinayo saacad kasta.
Warbixinta iyo Muuqaalka - Cadee iibka abkaaga, soo degsashada, iyo cusbooneysiinta adoo adeegsanaya aalado is-dhexgal ah. Falanqee iibinta taariikhda, waddanka, iyo xitaa gobolka dhammaanba hal bog.
Developer API - Barnaamij ahaan ku hel dhammaan xogta barnaamijka barnaamijka 'REST' API iyo kordhin ama abuuro codsiyo.
Soodejinta Xogta otomaatiga ah - si toos ah ugala soo bax xogtaada dukaanka.
La Soco Xayeysiiska Dhinacyada Iibinta - la soco dakhliga iAd iyo AdMob iyo waxqabadka isla marka loo eego iibka barnaamijka, laga soo bilaabo hal xisaab appFigures. Eeg aragtida, qasabno, iyo inbadan oo ah waddanka, taariikhda, ama abka.
Faallooyinka la tarjumay - akhri waxa adeegsadayaashu ka sheegayaan barnaamijyadaada dhammaan dib u eegista iyo qiimeynta lagu turjumay afkaaga.
Wada Shaqeyn Si Fudud - Si taxaddar leh ula wadaag xogtaada qof kasta oo xaddid xogta ay tahay in la helo iyo muddada.
Tags: amazon app rankingamazon appskormeerka barnaamijkadarajaynta barnaamijkaka warbixinta barnaamijkadarajada dukaanka appmuuqaaladadukaan tufaax ahdarajo app droidgoogle playdarajaynta barnaamijka macruufkabarnaamijyada macruufka